Xusida Sannadguurada Madaxbanaanida Jabuuti
Dalka Jabuuti wuxuu madax banaani ka qaatay gumeystaha Faransiiska bishii Juun 27dii, 1977. wuxuuna dastuur ahaan ka mid ahaa xidigtii Shanta geesood lahayd, taas oo astaanta u ahayd mabda Soomaliweyn. Maanta oo ah maalin si weyn looga qadariyo dalalka Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa madax ka tirsan adduunweynaha waxay kala qeyb qaatanayaan munaasabada lagu xusayo gobanimada dalkooda. Geesiyadii dalka Jabuuti oo ay wehliyeen daweynaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogeen ayaa halgan dheer waxey u soo galeen sidii heeryada gumeysiga Faransiiska ay isaga rogi lahayeen, sidaasna waxey ku naf waayayey geesiyiin qiimo badan ku dhexlahaa ummadooda sida halyeygii Maxamuud Xarbi.
Markii ay Jabuuti ku guuleysatay madaxbanaanideeda ayaa Mudane Xassan Guuleed Abtidoon noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee ay yeelato Jamhuuriyada Jabuuti, wuxuuna ku guuleystay doorashooyin dalkaas ka dhacay sanadkii 1981. Mudane Xasan Guuleed ayaa dalka Jabuuti ku hagey hogaan nabadeed una horseeday wadanka inuu ku shaqeeyo siyaasada dhex-dhexaadnimada ah. Intii uu Mudane Xasan Guuleed dalka ka arriminayay wuxuu dalka Jabuuti ka midnoqday Ururka Jaamacada Carabta, Ururka IGAD, Ururka Midowga Muslimiinta, ururka Midiowga Afrika iyo wadamada ku bahoobay ururka loo yaqaan FrancoPhone ee ku hadla Afka Faransiiska.
Magaalada Jabuuti oo ah caasimada dalka Jabuuti ayaa ah magaalo ku taal meel isku xirta dalalka Carabta iyo Afrika, waxeyna ku taal goob istiraatijiyad u ah rugta ganacsiga iyo mariinada maraakiibta ciidamada oo saldhigyo keyd sahay ka dhigta.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa doorashada madaxweynenimada ku guuleystay sannadkii 1999, wuxuuna ka mid noqday madaxda Afrikaanka oo miisaanka culus ku leh qaarada Afrika iyo dalalka Carabta. Wuxuu Madaxweyne Geele saameyn weyn ku yeeshay siyaasada dalalka Geeska Afrika, gaar ahaan waxaa si gaara loogu xasuustaa siyaasadiisa dhanka Soomaalida iyo sida uu ugu dadaaley ka dhaadhicnta shacabka reer Jabuuti iyo aduunweynahaba sidii ay qeyb weyn uga qaadan lahayeen gacan qabashada walaalaha Soomaaliyeed ee dowladnimadoodii ay burburtay. Waxey siyaasadaas miradhalisay markii dowlada Jabuuti iyo shacabkeeduba ay ka qeyb qaateen dhismihii dawladii Soomaaliyeed ee lagu soo dhisay dalka Jabuuti. Dowlada Jabuuti waxay weli daadaal weyn ugu jirtaa gaarsiinta iyo ka dhaadhicinta dowladaha aduunka dhibaatada Soomaalida dibeda looga hayo iyo qaabkii Soomaaliya ay u heli lahayd dowlad sugta amaanka dalka.
Arrintaas waxey marqaati u noqoneysaa sida madaxda Jabuuti marna aysan u hilmaamin gacanqabashadii Soomaalida ay ka geesteen xiligii ay halganka gobanimadoonka ugu jireen si ay uga madaxbananaadaan gumeysiga Faransiiska. Dalka Jabuuti wuxuu maanta aaminsan yahay in aynan marna illoobi Karin abaalkii ay u galeen walaalahooda Soomaaliyeed ee kala qeyb galay ka mira dhalinta xornimada Jabuuti.
Soomaalidu meel kasta oo ay dunida ka joogto waxay maanta la qeybsanayaan walaalahooda reer Jabuuti oo u dabaaldegeya 28 guurada ka soo wareegtay madaxbanaannidooda oo ku began maalinta Jun 27keeda. Waxeyna maanta waxgaradka Soomaalida ay u arkaan xoriyada Jabuuti midii dib ugu halgami lahayd soo nooleeynta qarankii Soomaalida ka dumey iyo gaarsiinta dunida codkeeda aan cidina dhegeysaneyn. Waxaa hambalyo mudan maalinta weyn oo astaanta gobanimo u ah shacabka reer Jabuuti, taas oo qimo weyn ugu fadhisa shacabka Soomaalida oo ay kula damaashaadayaan walaalahooda reer Jabuuti. Waxaa tilmaan gaar ah mudan in iftiinkaas ka kaahaya dalka jabuuti uu ahaado mid aan ka demin Geeska Afrika, una horseeda dalka iyo dadka reer jabuuti xoriyad buuxda oo ay ka gaaraan dhan walba.